Egwuregwu egwuregwu 27 kachasị mma na njikwa na ị gaghị echefu | Gam akporosis
Egwuregwu egwuregwu 27 kachasị mma na njikwa na ị gaghị echefu
Anyị na-aga na a ndepụta gam akporo egwuregwu na njikwa nke mere na anyị pụrụ ịnụ ụtọ ha dị ka ma ọ bụrụ na anyị na-na anyị console. Njikwa dị ka ndị nke PS ma ọ bụ Xbox bụ ndị ruru anyị uru zuru oke maka mgba ndị a.
Anyị nwekwara n'etiti ha ,Gbọ ala, ihe owuwu na ọbụna Street Fighter 2 simulators, ya mere, ka anyị gaa ngwa ngwa na ndepụta egwuregwu ndị a ị gaghị echefu n'ụzọ ọ bụla.
1 Dead Sel
3 Njikọ Steam
6 Oku nke Duty®: Mobile
7 GTA: Chinatown Agha
8 Castlevania: Symphony nke abalị
10 Oke Oke Ohia
11 2 Space Marshals
14 ntachi obi
18 Ụzọ Crossy
20 Ọnwụ ọnwụ na Canada
22 Horizon Chase - njegharị ụwa
23 Okwa isi
25 Edition Fighter IV Championship Edition
26 Fighter Fighter
27 NVIDIA GeForce UWA
Na-agba n'ihi na ọ bụ maka ụbọchị ole na ole na ọkara ọnụahịa otu nke kacha mma roguelike nakwa na ọ natara mmụba ọhụụ akwụ ụgwọ nke na-ewetara anyị onye isi ọhụụ ikpeazụ, ngwa ọgụ ọhụụ ọhụụ na ọkwa ndị ọzọ maka otu nke kasị mma adịchaghị maka gam akporo.
Y anyị agaghị ada mbà n’ito ọrụ nke onye nrụpụta ya rụrụ maka nke kacha mma nke ugbo anyị nwere na mobiles anyị. A na-akwụ ya ụgwọ ma baa uru na euro ọ bụla ka a na-achịkwa ya na ime ime ime ka ihe niile dị mfe.
Developer: Chucklefish Oke
Via Njikọ Steam anyị ga-enwe ike yiri egwuregwu anyị nwere na PC zụrụ n’ụlọ ahịa a ma ama. Nanị ihe dị ugbu a bụ ijikọ onye njikwa Bluetooth iji nwee ike igwu egwuregwu ndị ahụ na enweghị nsogbu.
Developer: valvụ Corporation
Ndị ọzọ nke royale agha nke na-akwado ndị na-achịkwa egwuregwu nke mere na ị ga-etinye aka na egwuregwu royale agha ha. Not gaghị enwe ike ibudata ya na thelọ Ahịa Play, mana ị ga-enwe ike ibudata ya na weebụsaịtị Epic Games ebe ha na-edozi esemokwu ha.
Un egwuregwu fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa ịnụ ụtọ ya na njikwa egwuregwu na ọ bụ ya mere na ọ na-akwado ya na-enwe na ime ara ara nke jumps na ikike pụrụ iche nke dike anyị megide ndị egwuregwu ndị ọzọ. Egwuregwu dị egwu na ngwa ngwa nke na-adịghị ada mbà.
Oku nke Duty®: Mobile
Egwuregwu ụmụaka na-aga n'ihu na-egosi mọzụlụ na mobile COD ka ebipụtala n'ụzọ kacha mma. O nwere nkwado iwu ka ị wee were nke si na PS4 ma ọ bụ PS5 wee nwee obi ike megide ndị egwuregwu ahụ n'ọtụtụ egwuregwu dịgasị iche iche ruo ọgụ nke gị.
GTA: Chinatown Agha
Rockstar Games malitere Chinatown Wars na Storelọ Ahịa Play na n'ezie, ịbụ otu n'ime benchmark nke mobile egwuregwu consoles, na-agba gburugburu ka ị wee nwee ike igwu ya n'ụzọ kachasị mma na njikwa. Ihe niile si Grand Izu Nchekwa onwe si n'elu echiche. Gwọ dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na ndepụta a.
Castlevania: Symphony nke abalị
Ndị ọzọ adịchaghị egwuregwu na-eweta nke a akụkọ ifo saga nke metroids na ọ bụ ya mepere ya. Egwuregwu na-emesapụ aka na ihe niile dị na ya nke ga-eweghachite ezigbo ncheta nke oge gara aga. Ọ na-akwado onye njikwa iji mee ka ọ nwekwuo obi ụtọ.
Grimvalor bụ egwuregwu dị egwu dị egwu na ndị na-ese ihe anya na nke iji iwu ga-eme ka anyị nwekwuo ike iji nwee ike ịga nke ọma site na veranda ya. Oge a ekwesighi ịgafe igbe ebe ọ bụ egwuregwu efu.
Oke Oke Ohia
Ma ka anyị na-enwe olile anya na otu ụbọchị akụkụ ya nke abụọ ga-abata na gam akporo, ebe ọ dị na iOS, Oceanhorn dị onye nke kasị mma-okokụre edinam RPGs na na na njikwa akara ọ na-egwuri ọbụna mma. Free maka obi ụtọ nke ọtụtụ.
Egwuregwu ọzọ na-eme egwuregwu oge na-enwe ọgụ na-aga n'ihu nke na-aga n'akụkụ na ụdị egwuregwu Cyberpunk, n'agbanyeghị na ọ nwere echiche nke isometric. Ọ bịarutere afọ ndị gara aga, mana nke anyị nwere ike igwu egwu ya n'efu yana njikwa njikwa ya, na-eme ya ka o ruo eruo ndepụta egwuregwu a.
Uno nke ezigbo ARPG anyị nwere na ụwa mepere emepe nakwa na ọ bụ egwuregwu adịchaghị. A na-emepụta map ahụ aghara aghara ka ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị agaghị akwụsị nyocha. Egwuregwu gbara gharịị na - enye gị ohere ịmepụta nka na ihu ihu site na mbara ala ndị ọzọ.
Crashlands: Nkọwa akụkọ nke ARPG
Developer: Ogbe ndi Shenanigans
Egwuregwu egwu dị oke mma ọzọ ọ gosipụtara ya na Teslagrad; na-eche ka ọ malite ọzọ mkpuru ka gam akporo n'oge na-adịghị. Oge a anyị na - emeso Tesla a ma ama na egwuregwu nke nwere njikwa na - eme ka ahụmịhe egwuregwu na - eme ka ọkụ na physics dịkwuo mma.
una nke egwu egwu emere kacha mma na nke ahụ na-akpọrọ anyị gaa n'ụgbọ mmiri n'ime nke nta nke nta anyị ga-achọpụta ihe kpatara ya, ndị bụbu ndị njem na-ejegharị ejegharị, ugbu a agbanweela ka zombies chọrọ iji ndụ anyị.
Ntachi obi: nje na oghere (pixel art RPG game)
Developer: Mbipụta nke Catappult
Ndị ọzọ ihe ijuanya nke nyiwe na nke ahụ na-eduga anyị na-eche ihe Viking bụ. Ahapụ ka anyị gwuo egwuregwu egwuregwu n'efu ka anyị wee gabiga anya anyị wee hụ na stifle na-esi n'akụkụ pụta mgbe anyị matara na anyị chere ihu nnukwu ikpo okwu. Mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ, mana ọ na-enye iwu nkwado ya….
Ndị ọzọ nke kacha mma nkịtị nyiwe anyị nwere na mobile na na ya otu-agba visual aka ọ na-enwe ike cajole ọtụtụ. Ọ bụ n'efu, ma ọ bụrụ na anyị na-a atta ntị na-enye ke ndaeyo na Christmas, anyị nwere ike nweta ya fọrọ nke nta ka free. Oge na-adịghị anya nke iwu ahụ ga-enyere gị aka nke ukwuu.
Onye na - eto eto Thomas Young, A onye mmepụta Indie nke na-achọta ebe ya na egwuregwu mkpanaka na na-ewe anyị ka anyị akara nke a dị jụụ ọkụkọ. Dị iche iche na ọkwa na a echiche nke ukwuu mmụọ nsọ site Mario egwuregwu n'ihi na gị gam akporo mobile kpamkpam n'efu.
Gịnị ma ọ bụrụ na Ọ Egwuregwu ọkụkọ nke ịgafe n'okporo ụzọ na n'okporo ámá dịkwa na remote ka inwee obi uto ya karie. A egwuregwu ama akụkọ na nke ahụ ka dị oke mma nke mere na ọ bụrụ na ị nwere onye nlekọta ejikọtara ọnụ, ịnwere ike igwu ya site ugbu a na ekwentị gị.
Developer: AKWPSKWỌ AHI
Na-egwu egwu ọzọ na RPG nke na-egwuri egwu na ijikọta egwuregwu dị iche iche dị iche iche site na oge dị iche iche site n'echiche nke ihe ngosi. Nke ahụ bụ, ị ga-aga site na ịkpọ nke ga-abụ site na 90s, gaa na nke ọzọ dị ugbu a. Na-enye nkwado njikwa iwu.
Ọnwụ ọnwụ na Canada
Un Egwuregwu kachasị elu site na Noodlecake Studios nke na-ekele nnukwu nkà ya iji mepụta egwuregwu na-enweghị usoro ebe mkparịta ụka na akụkọ dị iche iche na-agbanwe nke ha ka ọ ghara ịbụ otu, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime egwuregwu kacha mma kachasị egwu anyị nwere na mkpanaka. Oh, ị ga-enwe ọtụtụ narị zombies na ihuenyo.
El ugbu a kacha mma ụgbọ ala ịkwọ ụgbọala ịme anwansị egwuregwu na dị ka ọ na-adịghị adịchaghị. The ezi na-akwụ ụgwọ. Anyị nwere nhọrọ ịnụ ụtọ ọtụtụ egwuregwu na ihe ị nwere ike ịchọta na nke a ndepụta nke kacha mma gam akporo egwuregwu na-egwu na ndị enyi online. Ga-ahụ eziokwu nke ịnya ụgbọ ala dị elu na ekwentị gị.
Horizon Chase - njegharị ụwa
Egwuregwu egwuregwu ụgbọ ala ọzọ mana oge a dị ka a ga-asị na ọ bụ akụkọ ifo ahụ na-agba ọsọ nke igwe arcade. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe otu mmetụta ahụ yana iji akara na-edina na sofa ma nwee mbadamba nkume na tebụl, gaa maka ya.
Horizon Chase - Excgba ọsọ na-agba ọsọ na-atọ ụtọ
Developer: Aquiris Egwuregwu Studio SA
Site na ndị okike Crashlands si ọhụrụ a adịchaghị n'elu ikpo okwu egwuregwu ji ya larịị generator ya mere anyị nwere ike ịkekọrịta ha ma gbaa ndị ọrụ ibe na ndị enyi aka. Egwuregwu nwere njikwa nke dị n'ọkwa dị elu na teknụzụ yana nke ị ga-akwụ ụgwọ.
Un eme egwuregwu na-egwu egwu ma na-akwado egwuregwu nke ya na onye njikwa gị ga - enwe ezigbo oge na agha ha megide ndị isi nchịkwa ikpeazụ. Họrọ otu klas dị ka onye anwansi ma ọ bụ onye agha na RPG nke na-efu euro 5,49 iji nwee ọmarịcha ahụmịhe na-enweghị mgbasa ozi.
Edition Fighter IV Championship Edition
Anyị gụchaa usoro isiokwu a egwuregwu na onye na-achịkwa ya na ole na ole ga-eti ọkpọ. Street Fighter IV bụ ihe ọzọ kachasị mma na ndepụta iji nwee obi ụtọ Ken na Ryu na ndị mmegide ahụ. Mụta nkà nke Chun-Li na usoro ihe omimi niile nke na-achịkwa onye na-eche ọbụna karịa.
Ma e nwere ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ bụ ihe kasị mma n'akụkụ n'ọnọdụ ọgụ egwuregwu anyị nwere na gam akporo. Ugbu a ọ dị gị n'aka inyocha ya ma kpebie ma ọ kachasị mma. Enwere ọtụtụ nke na - eme ka o sie ike, mana ọ na - eji ezigbo eserese, ọtụtụ ndị agha na mmetụta ndị ahụ na - eme ka egwuregwu ahụ dị ọcha.
Y Anyị mechara ndepụta a site na NVIDIA's Netflix-like game streaming platform. Site na ijikọ Bluetooth jikọtara ya na mkpanaka gị, ịnwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu efu na nke a zụrụ site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dịka Epic Games, Steam or GOG.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu egwuregwu 27 kachasị mma na njikwa na ị gaghị echefu
The 39 kacha mma gam akporo egwuregwu na-egwu na ndị enyi online